ubuhle wemvelo bekulokhu futhi kuyoba udumile, naphezu kweqiniso lokuthi izindlela ukuze indalo yayo ngcono nangenkathi yonyaka. Indlela ethandwa kakhulu ukwakha ngendlela ejwayelekile futhi enhle ezinkathini zonyaka ambalwa adlule isibe eziyinkimbinkimbi kodwa ngempumelelo inqubo brondirovanie.
Kuyini brondirovanie: lokho - i BROND umbala?
Brondirovanie - iyathandwa kuze kube manje futhi inqubo ngobuchwepheshe kuyinkimbinkimbi kakhulu izinwele Umbala, okuyinto ihlose ukwakha umphumela engokwemvelo umbala ayegcwele ukuchichima ithambe imicu.
Ngaphakathi the gama of inqubo kuyisihluthulelo kuvisisa umbala. Brond - lokhu akukona ngephimbo elifanayo, njengoba nsundu ukuhumusha kusuka IsiZulu kusho nsundu, ezimhlophe - ukukhanya. Brondirovanie kungumsebenzi cishe ngamagugu ku ukuxuba shades eziningana, zehlukene degree of ukugcwaliswa. Okungukuthi, abangabantwana gamma imibala ubanzi ngokwanele: ushokoledi, onsundu, ikhofi, ukukhanya esinsundu, izakhi segolide beige blonde.
Izici Umbala isitayela BROND
Imfashini umbala BROND ungaya kusuka cishe yimuphi umbala. Kodwa lapho ukhetha imibala ngempela kufanele acabangele izici ngazinye ngeso yemvelo umbala, isikhumba kanye, yebo, original izinwele umbala.
Ukuze brondirovanie engcono inezinwele ezinde noma izinwele ubude amaphakathi, njengoba kuyoba lapho nokudakwa esandleni esiyingcweti, futhi umphumela wokugcina nabo bonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama nombala kokuqhathanisa kuyoba lidlondlobala.
Ukuhlolwa e brondirovanie cishe engapheli. Ungakwazi ziyahlukahluka umbala, unezela imibala emisha, unezela ukukhanya okwengeziwe noma nangezindlela amnyama, ukushintsha degree ojulile elihlwelwayo zone impande.
Inqubo brondirovanie: izinzuzo. Lapho-ke akudingekile ukuba awenze?
Staining BROND isitayela ikuvumela ukuba wenze izinwele umbala bazwakale, engeza akhanye, ukuminyana nobukhazikhazi ezibukwayo. Eqeda Excellent le nkinga njengoba ekuqaleni kwempunga.
Akufanele uzizamele brondirovanie wobulili qotho ultrashort haircuts. Akubalulekile ukuba adalule eyengeziwe chemical kuhlasela izinwele, ngemvelo noma emva kokuthi ukuhlolwa olandelayo baba ukungena nakwamanye amazwe, ezilimele.
Umehluko ezimhlophe brondirovanie futhi izinwele ezimnyama: inqubo multi-esiteji
Naphezu kweqiniso lokuthi inqubo kuyafana eyodwa yokusondela ukushaqeka izinwele ngemibala ehlukene, futhi, zizohluka. Brondirovanie ku izinwele konsundu futhi has omunye umehluko omkhulu owakhiwa yokuthi imicu amnyama zidinga ukucaciseleka ngaphambi. Ngaphezu kwalokho, inqubo cishe ngomklamo ofanayo. Kusukela ithoni eliyisisekelo lisetshenzisiwe occiput, lapho imikhawulo kungukuthi ezinemibala. Kusobala Strand esingunxantathu ecacisa ukuthi kudala umphumela ukuvuleka emkhakheni engokwemvelo sokuvalelisa. Imikhawulo iphathwa upende ka ithoni ukuxegiselwa. Ngemva kokumunca upende wageza off, futhi kwenza isitayela.
Brondirovanie Classic ikhofi noma ushokoledi imibala
Ukuze imibala zakudala kukhona ukusetshenziswa brondirovanie ubuchwepheshe uveza umbala zemvelo kakhulu futhi zemvelo. Expensive nangempumelelo ubukeka brondirovanie usebenzisa ansundu, ithusi-Chestnut, ngokwemvelo ansundu kanye ikhofi amanothi shades blonde nge nut zethusi esikalini. Nakuba brondirovanie izinwele ezimhloshana akugcini leli banga. Staining isitayela BROND emhlabeni, njengoba kulula kakhulu ukuthi iguqule, kulungile, kuye ngokuthi inkathi yemfashini.
Classical brondirovanie ukukhanya ezimhlophe izinwele engenziwa umbala efudumele noma ezibandayo. Beauties abakhetha imibala cool, kufanele sinake ikhofi ansundu, ukukhanya esinsundu, beige kanye umlotha kanye ziyadliwa amathoni nge Splashes linseed noma ziyadliwa ukukhanya blonde.
Ngo izinwele zonyaka yamuva brondirovanie obunsundu ngenkuthalo ukuzifunela ukuxhaswa kombono ngoba ukusetshenziswa amathoni umnyama imicu eliphezulu, okuyinto atypical ngoba staining classical BROND isitayela. Uncamela ucwaningo ezifana namantombazane Brunette.
brondirovanie Classical ngokunyenyeza ukukhanya
Le ndlela ukufeza umphumela yemvelo kakhulu kudinga izinqubo eziningana staining usebenzisa eziningana Umbala tinting zombala. Mix of imibala egqamile ukujula ezahlukene kudala umphumela volume okwengeziwe izinwele ngemibala ezihlangene zigutshuzelwe eyodwa kuya kwenye. Olukhulu ukukhanya ensundu, hazel, inhlaka, uju, beige, ikhofi, ukolo pearl shades ukunikeza mane ukukhazimula efudumele futhi dlidliza elangeni.
Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa nge ukufakwa ngokulinganisela umbala okhanyayo usibonisa bendabuko brondirovanie izinwele. On the intombazane brown asebegugile sifisa Blondet, ngokuya uncamela ukubhekana shades ukukhanya okuningi emakhazeni (nelineni, pearl, pearl beige, umlotha-ezimhlophe) noma efudumele (uju, ukolo, igolide, beige kanye ikhofi) imibala. Le nqubo ibizwa ngokuthi brondirovanie ukukhanya.
Ukuze okumsulwa ukukhanya shades ku izinwele ezimnyama ngokuvamile kudinga multi-esiteji Umdwebo uhlelo ukuthi ngeke nje ukudala shades anobuciko, kodwa futhi ukulondoloza impilo kanye nesakhiwo imicu. Kukhethwa amasu Umbala ekukhanyeni brondirovanie isitayela kwi shock amnyama izinwele kuhilela ikhumbula umbala wemvelo, izinwele kanye oyifunayo umbala sokugcina. Idinga izinwele ekubuyiseleni ngaphansi izinqubo ukwelashwa eyengeziwe (ezifana yi-keratin noma sokwenziwa keraplastiki).
Bright brondirovanie izinwele ezimnyama - inqubo akuyona elula, futhi silethembe ukuba izandla ithatha okunekhono ochwepheshe.
Brondirovanie ngu esishintshashintshayo
brondirovanie ngokwezindawo - umthunzi nemfashini, eyenzelwe nebafati abakwazisayo ukuhlukahluka kanye okwakhe. Kulokhu, lo Umbala kwenziwa ngemibala egqamile izinwele kuphela indawo phezulu, ingxenye engezansi ababethi mnyama - chocolate, onsundu ngokuphaphathekile noma abe obunsundu - umbala. Ukwelekelela brondirovanie phezulu esikhundleni sokukhanya nokukhanya brown izinwele umbala kungaba ikhefu ezonini impande.
Brondirovanie kuhlangene Ombre Izinwele Color
Lolu hlobo brondirovanie zonal eqala bushelelezi, kancane ebonakalayo kanye ubude lonke izinwele umbala ushintsho kusuka ugesi endaweni yempande umthunzi ukuxegiselwa enisemikhawulweni. Umphumela umphumela imibala yemvelo kakhulu nesichichimayo komunye. Ngoba izimpande ke kungcono ukusebenzisa ikhofi, ushokoledi noma onsundu. play abathandwayo umbala emaceleni ingatholakala ngokusebenzisa libheke phezulu yokudala ezinye imibala egqamile, ezifana kakolweni ukukhanya noju ansundu.
Brondirovanie ku izinwele medium ensundu umphumela Ombre Luhilela kokubili elincane futhi wamemezela ngilulekela umbala kusuka izimpande kuphelile. Ububanzi ukubopha impande indawo kungaba isukela encane 10-isentimitha ebanzi ngokwanele ukuba ukufinyelela emaphethelweni umhlathi ongezansi.
brondirovanie Professional nokukhanya ezimhlophe izinwele Ombre isitayela kungase kwenziwe nge nangezindlela elikhanyayo enisemikhawulweni izinwele, isb mbumbulu ilangabi izilimi.
Brondirovanie isitayela Brond Super Yemvelo
It brondirovanie izinwele izinwele brown nombala omnyama ukungabi iconsi abukhali, okuyinto kudala umphumela engokwemvelo kakhulu. Ubuciko multi anemibala iyashintsha iyaphupha ibe ukudaya kusebenza kokubili amnyama futhi izinwele ukukhanya. amantombazane Blonde kufanele sinake ziyadliwa ukukhanya brown, beige nokukhanya ensundu, uju ekhishwa ensundu. Brunette Ungakhetha phakathi zethusi ansundu, ikhofi segolide, nogologo beige caramel ensundu, ushokoledi, ikhofi, umlotha-ezimhlophe futhi shades beige. Lezi inhlanganisela umbala kuzodala hhayi kuphela umthamo ebonakalayo ezibukwayo kuya izinwele, kodwa futhi engaqondakali ukukhanya imicu ezinikeza isithombe obugagu neziyinkimbinkimbi.
Ohlukile inqubo brondirovanie ngokuvamile ukubuyisela izinwele umbala akudingekile. izimpande Regrown engeza elikhuhluziwe esithombeni, kodwa akusho lonakaliswe. Ukuze wandise umphumela brondirovanie ku ukukhanya ezimhloshana kungaba ngaphezu kwalokho usebenzise inqubo Biolaminirovanie.
imibala Evumelanayo, ukucabanga okukhulu, ngempumelelo ukubiyela imicu evela kumuntu noma lonke nentaba yokugunda vibration ku inhloko izinwele umbala - konke lokhu kubizwa ngokuthi izinwele brondirovanie. On izinwele ensundu amnyama imicu inqubo kuthinta Akumangalisi ukuthi isinyathelo esinqala sokushintsha nokuguqula isithombe nge umonakalo okuncane izinwele ngokwazo.
Zezinwele for izinwele ezinde
Zdorovoye izinwele - imithetho ukunakekelwa
Ngubani empeleni kuyinto isinambuzane, efana hummingbird?